သံစဉ်မဲ့ အလင်္ကာများ: ထင်းရူးနံ့သင်းသော ဧရာဝတီ
Casablanca က ပါသေးတယ်
အီလယ်လယ်နဲ့ ဘယ်လိုတုန်းမသိဘူး အားလုံးကိုတော့နားမလည်ဘူး ဒါပေမဲ့ ဖတ်လို့ကောင်းတယ်
ဘာရသပေးတုန်းဆို ကျွန်တော် မပြောတတ်ဘူး
Comment by ဒေါင်းသေချောင်းမှာ ပျော်သည့် ကျား — July 28, 2010 @ 2:41 am |Edit This
လာဖတ်သွားတယ် မလေးရေ. ထင်တော့ ထင်နေသား.. သေတော့မယ်ဆိုတာကို. ။ တစ်မျိုးကြီးဖြစ်သွားပြီ။
Comment by winkabar — July 28, 2010 @ 5:22 am |Edit This
မမရယ်..ဖတ်ပီးဝမ်းနည်းလိုက်တာ.. စိတ်ထဲမှာလဲတစ်မျိုးကြီးဘဲ..း((
Comment by ကူးကူး — July 28, 2010 @ 5:37 am |Edit This
ဖတ်ရတာ ခံစားမူ တစုံတရာကို ပေးတယ် မလေး၊
စာတွေ အများကြီး ဆက်ရေးပါအုံး။
Comment by အပြုံးပန်း — July 28, 2010 @ 5:42 am |Edit This
(အဲ့သလို အိမ်နီးချင်းတွေရှိရင်ကောင်းမယ်…..။ စကားများပြီး စာအုပ်တွေ…ဖုန်းတွေလွှင့်ပစ်ရင် အပေါက်ကနေ အသာလေးစောင့်ကောက်ရအောင်လေ..း))
Comment by ဏီလင်းညို — July 28, 2010 @ 7:29 am |Edit This
အစ်မ သိပ်စိတ်ကူးယဉ်တတ်တာဘဲ..အရမ်းတွေးပြီးရေးထားပုံဘဲ ။ တကယ့်အပြင်မှာတော့ အဲသလိုလုံးဝမဟုတ်မှာတော့ သေချာတယ်..။
Comment by Evergreen Phyo — July 28, 2010 @ 7:56 am |Edit This
သူများတကာတွေက အသွင်တူ၏ မတူ၏ကို ပျော်စရာလေးတွေ ရေးဖွဲ့ထားတာ
မလေးကျမှ ဒီလိုကြီး အဆုံးသတ်ပစ်လိုက်တယ်.
Comment by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) — July 28, 2010 @ 1:12 pm |Edit This
ထူးခြားမှု့ (Unique) ဆိုတာ လူတိုင်းမှာ မရှိဘူး။
အဲဒီလို ထူးခြားမှု့ရှိတဲ့ သူတွေကို..,
ဒီလိုပဲ ရိုးရှင်းစွာ ကွန်မန့်ခဲ့ပါတယ်။
Comment by Soe Mya Nandar Thet Lwin (Borros Roxo) — July 28, 2010 @ 5:47 pm |Edit This
မလေးရေ မသီတာ ပူဆာလို့ ၀တ္တုလေးရေးပေးတာ ၀မ်းလည်းသာ၊ ကျေးဇူးလည်းတင်…း)
ဒါပေမဲ့ ဖတ်ရင်း မျက်ရည်တွေ ဝေ့လာလို့ ပုတ်ခတ် ပုတ်ခတ် လုပ်ပစ်ရတယ်…း(
တနေ့ကျ ဒီလမ်းကိုသွားရမှာ သိပေမဲ့
သူအယင်သွားမလား ကိုယ်အယင်သွားမလား အတူတူသွားမလား ဆိုတာတော့ မသိနိုင်ပြန်ဘူး။
“…ကျမကတော့ ယုတ္တိသိပ်ဆန်လွန်းပြီး တစ်လလောက် ရင်ထဲစွဲနစ်ခံစားနေရမယ့် ကားမျိုးတွေကို မကြည့်ချင်ဘူး။ ပြီးရင် အကြာကြီး စိတ်ကကောင်းမှာ မဟုတ်ဘူး…”
ပို့စ်ဖတ်ပြီး အကြာကြီး စိတ်က…
Comment by S-C — July 28, 2010 @ 6:02 pm |Edit This
အမှန်တိုင်း ပြောရရင် နားမလည်ဘူး ကျနော် တော်တော်ညံ့သေးတာပဲ ။
Comment by မောင်မျိုး — July 28, 2010 @ 6:35 pm |Edit This
မောင်…. ကျမသေရင်လေ…..၀မ်နည်းတဲ့ပွဲထက်…. ပျော်ပွဲရွင်ပွဲလုပ်ပေးနိုင်မလားဟင်…..
ဆိုတဲ့ ဆန်းသစ်တဲ့ အတွေးလေးကို… သဘောကျမိပါတယ်….
အဲဒီ ပျော်ပွဲရွင်ပွဲဟာ တစ်ကယ်တော့……. ကျန်ရစ်ခဲ့သူအတွက်ပါ…..
ကျန်ရစ်ခဲ့သူ စိတ်ချမ်းသာ စေဖို့ထိ ချစ်ခဲ့တာပါလား ….
Comment by နိုးအိမ်ရှင် — July 29, 2010 @ 1:55 am |Edit This
Comment by ခိုင်နုငယ် — July 29, 2010 @ 4:17 am |Edit This
နှစ်ယောက်ယှဉ်ပြထားတဲ့နေရာတွေ ရောက်တော့ အသွင်တူ၏မတူ၏ကို တွေးမိသွားသေးတယ်။
မဟုတ်လောက်ပါဘူးလေဆိုပြီး သူမကို ကျနော်ဘေးကနေ ထိုင်ကြည့်မိသွားတယ်..
အကြောင်းအရာလေးတွေကို ဖြည်းဖြည်းချင်းထည့်သွင်းသွားတာလေး အရမ်းလှတယ်ဗျာ
Comment by ရွာသားလေးဝိုင်တီယူ — July 29, 2010 @ 6:00 am |Edit This
လာလည်သွားတယ် မလေးရေ… အပေါ်ပိုင်းတွေ မတူပေမယ့် နောက်ဆုံးပိုင်းတော့ တူတယ် လှိုင်လဲ အဲလို မှာဖူးတယ်ဗျ
Comment by ခွန်မြလှိုင် — July 29, 2010 @ 6:23 am |Edit This
အစက ၀တ္ထုတစ်ပုဒ်ပဲထင်ထားတာ ဖတ်ရင်းနဲ့မှ မသီတာရဲ့တဂ်ပို့စ်လို့ သိလိုက်တယ်။ အဆုံးသတ်မှာ တကယ်ပဲ စိတ်မကောင်းဘူး။
ဒါပေမဲ့ တဂ်ပို့စ်ကို မလေးလက်ရာအတိုင်း ၀တ္တုတစ်ပုဒ်သဖွယ် ဖန်တီးပြီး ရေးသွားတာကို ကြိုက်မိတယ်။
Comment by ဇွန်မိုးစက် — July 29, 2010 @ 7:39 am |Edit This
Comment by ဇွန်မိုးစက် — July 30, 2010 @ 1:15 am |Edit This
အစ်မလာဖတ်သွားပါတယ်။ တဂ်ပိုစ်လေးကိုအစ်မရေးသွားတာဖတ်လို့ကောင်းတယ်ဗျာ။ အစ်မ ကျန်းမာပျော်ရွင်ပါစေ။
Comment by တောသားလေး — July 30, 2010 @ 1:42 am |Edit This
နောက်.. ဖြစ်နိုင်ရင်လေ… ကျဉ်းမြောင်းတာတော့ မဟုတ်ဘူး။ မြန်မာတွေနဲ့ပဲ လက်ဆက်စေချင်တယ်..နော်…မောင်”
Comment by ဒေါင်းမင်း — July 30, 2010 @ 3:11 am |Edit This
ဒီပို့စ်ကို တိတ်တိတ်လေး လာလဖတ်တာ ၃ ခါရှိပြီ။ ဖတ်ပြီးတိုင်းလည်း စိတ်ထဲမှာ ညွတ်နူးကျန်ခဲ့တယ် မမအိမ့်ရယ်…
Comment by ရွှေပြည်သူ — August 4, 2010 @ 9:44 am |Edit This
မလေးရေ။ အသွင်မတူပေမယ့် ချစ်ကြတဲ့သူနှစ်ယောက် သေကွဲကွဲသွားတာ စိတ်မကောင်းလိုက်တာ။
Comment by ကေသရီ — August 4, 2010 @ 11:15 pm |Edit This
မလေး. မွန်စာလာဖတ်တယ်….အသွင်တူ၏ မတူ၏ တွေအများကြီးဖတ်ပြီးပြီ.. ဒါလေးကတော့ ဆွတ်ပျံ့လွမ်းမောစရာ.. အင်း မလေးလက်ရာပဲလေ..အရမ်းသတိရတယ်မလေးရေ
Comment by မွန် — August 5, 2010 @ 9:43 am |Edit This
Ma Gyi Good Del ……nice
Comment by Phyo — August 7, 2010 @ 8:26 pm |Edit This
Comment by sosegado — August 8, 2010 @ 6:38 pm |Edit This
အလည်လာကြသော.. မောင်နှမများအားလုံး ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ..
Comment by မလေး — August 8, 2010 @ 11:23 pm |Edit This
A Thit Tin Own Lay. De mar lar dar 18 Kar sheet be.
Comment by Htate Htar — August 11, 2010 @ 1:55 pm |Edit This
တဂ်ပို့စ်လေးကို ဒီလိုလေးရေးတာ ဆန်းသွားတယ်… ခလေးတွေရပြီးဆံပင်ဖြူချိန်ကတော့ အနာဂတ်မှာဖြစ်မဲ့ဟာပေါ့… ရုပ်ရှင်မကြည့်ဖြစ်ဘဲ ပင်လယ်ကမ်းခြေရောက် သွားတဲ့အထိကတော့ မလေးမှမလေးဘဲဟုတ်
Comment by rose of sharon — August 13, 2010 @ 8:34 am |Edit This
Comment by Anonymous — August 27, 2010 @ 7:33 am |Edit This
စာရေးသူ--> အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 2:51 PM